Dufcadii koowaad ee ciidanka Qaranka oo tababar loogu soo xiray Kismaayo (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dufcadii koowaad ee ciidanka Qaranka oo tababar loogu soo xiray Kismaayo (SAWIRO)
Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) uu maalintii shalay tababar usoo xiray ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka Soomaaliyeed qeybtiisa 43-aad.
Ciidankaasi oo tiradooda gaareyso illaa 1,350 ayaa sida la sheegay laga kala keenay meelo kala duwan oo dalka ka mid ah, waxaana goobta xafladda tababarka ciidankaasi loogu soo xiray ku sugnaa wasiiru dowlaha gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo taliyaha ciidamada Qalabka sida.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo hadal kooban ka jeediyay goobta xafladii xeritaanka tababarka ciidanka ayaa sheegay in ciidamadaan ay u baahan yihiin taakulo iyo qalab, wuxuuna ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo inuu hubeeyo islamarkaana dhameystiro qalabkooda, si ay uga qeyb qaataan dagaalka lagula jiro Xarakada Al-shabaab.
Sidoo kale, Axmed Madoobe ayaa ciidamadaasi ku booriyay inay muujiyaan dareen lahaansho oo ay dalkooda kaga xureeynayaan Al-shabaab, islamarkaana ay naftooda u huraan sidii ay u hanan lahaayeen guud ahaan dalka Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, ciidamadaan tababarka loo soo xiray ayaa noqonaya dufcadii ugu horeeysay ee ka qalin jabisa qeybta 43-aad ee ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed, waxayna ka kooban yihiin kumaandooska iyo ciidamada lugta ah.